Kuma Jeclahay Anymore - Akhriso Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Kuma Jecla Inaan Hadhow Celceliska 4.4 / 5 ka mid ah 36
58aad, waxay leedahay 65.2K views
Nivea, adduunku wuxuu u muuqday jiilaal daa'im ah. Waalidiinteed iyo gabdhaheedba waxay siiyeen garabka qabow tan iyo markii ay ilmo ahayd. Markay ku dhacday barafka, cidina uma dhaafin jalleecdeeda. Runtii waxay ahayd jiilaal cabsi badan.
Intii ay noolayd maalinba maalinta ka dambaysa sida doll on shelf shelf, Nivea waxay ku hawlanayd qayb ka mid ah heshiiska umusha ka hor aabbeheed iyo aabbaheed seygeeda. Ninkeedii wuxuu ahaa Wistash. Duke Valor Wistash.
Sidii ay ugu horreysey masiibo kasta, dhammaantood waxay ku bilaabmeen jacayl la habaaray.
“Jacaylku wuxuu leeyahay daqiiqado. Dhammaantood waad u xiisay, haddana hadda ka dib kuma jecli adiga. ”
Niveia waxay ku tiri ninkeedii oo aan waligeed eegin iyada tobankii sano ee la soo dhaafay, ka dibna ka tagay Boqortooyada oo u aaday waddanka deriska ah halkaas oo lagu soo dhoweeyay gacmo furan.
Waxba kama fileynin halkaas waxayna si fudud u qorsheyneysay inay si aamusnaan ah ugu noolaato laakiin aragtida Emperor ee ku wajahan iyada ayaa ahayd mid aad u saaxiibtinimo badan
Waxaan rabaa inaad ku faraxdo. Waxaad rajeyn kartaa wax kasta oo aad sameysaa sida aad rabto. Waxaan rabaa inaan ku siiyo xilli aadan u baahnayn inaad si joogto ah uga digtoonaato dadka kale. ”
Ka dib la kulanka Arendt, Nivea jiilaalkeedii wuxuu bilaabay inuu qulqulo… guga maaddaama barafku bilaabay inuu dhalaaliyo.
Ku raaxeyso inbadan manhwa, manhwa 18, manhwa oo kaliye ah, macnaha manhwa, manhwa manga, gamer manhwa, manhwa korean, akhri manhwa, manhwa ugu fiican, manhwa xanuunka, manhwa iyo manga, dagaal aamusan manhwa, manhwa online, manhwa cayriin, manhwa bastard, majaajilada manhwa, manhwa bangiga dhiigga, bl manhwa, yaoi manhwa, waa maxay manhwa, manhwa bl, bj alex manhwa, isku xidhka dhiigga manhwa, munaaradda ilaaha manhwa, wax nagu saabsan manhwa, lookism manhwa, qeexidda manhwa, ugaadhsadaha ugaarsiga manhwa, marna ma fahmin manhwa, saxeex manhwa, ka akhriso manhwa onlayn, jacaylku waa manhwa dhalanteed ah, iga badbaadi manhwa, manhwa wanaagsan
Cutubka 44	October 16, 2021
Cutubka 43	October 16, 2021
Cutubka 42.5	October 6, 2021
Cutubka 42	October 6, 2021
Cutubka 41.5	October 6, 2021
Cutubka 41	October 6, 2021
Cutubka 40.5	July 7, 2021
Cutubka 40	July 7, 2021
Cutubka 39.5	July 2, 2021
Cutubka 39	July 2, 2021
Cutubka 38	June 24, 2021
Cutubka 37	June 24, 2021
Cutubka 36.5	June 24, 2021
Cutubka 36	June 24, 2021
Cutubka 35	June 5, 2021
Cutubka 34	June 5, 2021
Cutubka 33	June 5, 2021
Cutubka 32	June 5, 2021
Cutubka 31	June 5, 2021
Cutubka 30	Waxaa laga yaabaa 29, 2021
Cutubka 29	Waxaa laga yaabaa 29, 2021
Cutubka 28	Waxaa laga yaabaa 29, 2021
Cutubka 27	Waxaa laga yaabaa 29, 2021
Cutubka 26	Waxaa laga yaabaa 24, 2021
Cutubka 25	Waxaa laga yaabaa 18, 2021
Cutubka 24	Waxaa laga yaabaa 7, 2021
Cutubka 23	April 8, 2021
Cutubka 22	April 8, 2021
Cutubka 21	April 6, 2021
Cutubka 20	April 6, 2021
Cutubka 19	April 2, 2021
Cutubka 18	March 14, 2021
Cutubka 17	March 5, 2021
Cutubka 16	February 27, 2021
Cutubka 15	February 27, 2021
Cutubka 14	February 24, 2021
Cutubka 13	February 21, 2021
Cutubka 12	February 21, 2021
Cutubka 11	February 21, 2021
Cutubka 10	February 19, 2021
Cutubka 9	February 16, 2021
Cutubka 8	February 16, 2021
Cutubka 7	February 16, 2021
Cutubka 6	February 13, 2021
Cutubka 5	February 13, 2021
Cutubka 4	February 13, 2021
Cutubka 3	February 13, 2021
Cutubka 2	February 9, 2021
Cutubka 1	February 9, 2021
Cutubka 0	February 9, 2021
Serverka Waqtigiisa Dhamaaday